Mpikambana:Bot-Jagwar/ambangovangon'ny zavatra ataony - Wikipedia
Mpikambana:Bot-Jagwar/ambangovangon'ny zavatra ataony
1 1 Mey 2011
2 16 Mey 2011
3 8 Jiona 2011
4 10 Jiona 2011
5 21 Jiona 2011
6 Novambra 2011 - Jolay 2012
1 Mey 2011Hanova
Ankehitriny ny tenako dia manomboka mamorona lahatsoratra amin'ny alalan'ny rôbô. Ny fomba fandehanan'io rôbô alefako io dia mitroka ny fampahalalàna izay ilaina trohany any amina wiki (atao hoe wiki loharano) mba hametraka ilay fampahalalana any amin'ity wiki ity. Ny taranja voakasik'ilay famoronana lahatsoratra amin'ny alalan'ny rôbô dia ny kaominina manerana ny Frantsa, miaraka amin'ny tanàna manerana ny tany : eo ampanomanana ny famoronana lahatsoratra momban'ny tanàna any Madagasikara izao ny tenako, fa mbola tsy vonona izany, fa ho avy tsy ho ela.
Ny wiki ho loharano dia ny wikipedia amin'ny fiteny anglisy. Ary ny wikipedia amin'ny teny malagasy no hatao wiki tanjona.
Ankehitriny aloha ny tenako mbola tsy mahavita rôbô mpandika teny fa rehefa betsabetsaka kokoa ny fahaizako dia mety ho vita ihany izany.
Misy olona manaiky ary tsy manaiky ny fanampiana fampahalalana ilaina amin'ny alalan'ny rôbô ; marina fa ilaina mitandrina ihany ny fanampiana fampahalalana amin'izany fomba izany, indrindra noho ny fanararaotana efa nisy tany amin'ny wiki hafa (volapoky ohatra). Hampiasaiko moramora ihany io rôbô io.
Jagwar grr... | 1 Mey 2011 à 18:59 (UTC)
16 Mey 2011Hanova
Noho ny havitsian'ny mpandray anjara mahasahy manoratra lahatsoratra eto amin'ity Wikipedia amin'ny teny malagasy ity, dia tapaka ny hevitro fa hamorona lahatsoratra roa na telo arivo miampy indray izaho eto amin'ity Wikipedia amin'ny teny malagasy ity. Ny nahatapaka ny hevitro tao dia ilay havitsy ny mpikambana mavitrika eto amin'ity Wikipedia ity (Mpianatragasy ary i Nyeja ihany izao ny mpikambana mba mavitribitrika amin'izao fotoana izao). Efa manomboka tsy misy koa manko ilay fotoana ka ny rôbô sisa no afaka mandimby ny tena, amin'ny fanitsiana teny (ary teny ihany fa tsy rafi-pitenenana), amin'ny fanampiana fampahalalana anaty lahatsoratra, ary ankehitriny ny famoronana lahatsoratra avy amin'ny fampahalalana azo avy tany amin'ny Wikipedia amin'ny fiteny hafa.
Izaho manohana, noho ny fotoana manomboka tsy misy noho ny antony isan-karazana (fiainana ara-tsosialy, fanadinana mila homanina), manomboka tsy misy intsony ny fotoana ananako mba hanoratra eto amin'i Wikipedia, ka efa nametraka hafatra izao noho izay ; fa noho ny tsi-fisian'ny mpikambana nahadimby ny tenako teto amin'i Wikipedia, dia tonga indray aho niverina teto ; ary nitady fika hamoronana lahatsoratra tsotsotra amin'ny alalana rindrankajy soratana amin'i Python.
Rehefa avy nandinika lalina an'i Python, dia tonga nanoratra rindrankajy hangalana ny fampahalalana ao anaty Infobox ny tena. Dia rehefa vita avokoa ireo fanandramana isan-karazany, dia lasa amin'izay nandefa ilay zavatra.
5000 ny lahatsoratra voasoratra tanaty ny iray herinandro, voasoratra folo andro taoriana ny lahatsoratra faha 10000, ary te-hanohy amin'izany lalana izany aho ; raha eken'ny mpamaky teny malagasy izany zavatra hataoko izany.
--Jagwar grr... | 16 Mey 2011 à 15:24 (UTC)
8 Jiona 2011Hanova
Lasa fanintelony indray ny famoronana lahatsoratra amin'ny alàlan'ny rôbô. Efa natomboky ny rôbô-ako daholo ireo lahatsoratra momban'ny kaominina frantsay (eo amin'ny valo arivo eo ho eo no isany) ary ny kaominina malagasy (efa vita daholo, fa misy hadisoana nety nataon'ny rôbô ary novainy tamin'ny votoatiny izay tiany ireo lahatsoratra efa voaforona ary efa tsara vita, tena miala tsiny).
Efa natomboka ireo lahatsoratra momban'ny tanàna any Brazila, fa mbola lavitra ny lalana. Mikasa ny hamorona lahatsoratra (soratako manokana na foronin'ny rôbô) momba ireo renivohi-pirenena manerana izao tontolo izao aho ; fa mbola tsy vita tanteraka ilay rindrankajy hanaovako azy noho ny fotoana tsy misy...
Saika nanoratra kaody python koa izaho hamorona lahatsoratra momba ireo mpilalao filma ary teatra malaza erak'izao tontolo izao, fa eo koa tsy misy ny fotoana, ary sarotra amboarina ihany ilay rindrankajy. Mandray sosokevitra avy aminareo mpamaky eto aho na dia efa masamasaka ato an-tsaiko aza izay zavatra hataoko handritry ny roa volana.
--虎grr... | 8 Jiona 2011 à 15:27 (UTC)
10 Jiona 2011Hanova
Fametrahana ny zavatra tokony atao isaky ny lahatsoratra noforonin'i Bot-Jagwar, mikasika ireo tantara tokony mila apetraka, ireo fampahalalana mety ilaina, ireo toerana azo itsangatsanganana, sns.
21 Jiona 2011Hanova
Fandanjana lahatsoratra ambangovangony amin'ny alànan'ny Rôbô
Ireo lahatsoratra izay mbola ambangovangony dia nosokajiana araka ny lanjany : ireo lahatsoratra kely dia kely, izany hoe milanja latsaky ny teny zato, na oktety dimanjato ; ireo lahatsoratra eo ho eo, izay azo atao hoe lahatsoratra manana lanja eo amin'ny 500-1000 oktety, ary ireo lahatsoratra efa mba lehibehibe izany hoe mihoatra ny arivo oktety na teny zato. Indray mandeha isam-bolana no anaovana izany fandanjana izany, hijerena ny fivoaran'ny hatsaran'ny lahatsoratra eto amin'i Wikipedia.
Fanitsiana ny hadisoan-tsipelina ao amin'ny lahatsoratra rehetra ary fanampiana rohy anaty
Manomboka androany no hametrahana ireo rohy interwiki ary anaty wiki. Mila apetraka izy ireo dia amin'izay mba hampahalala ireo mpitsidika eto amin'i Wikipedia ny fisian'ny lahatsoratra sasany. Indray mandeha ihany no ametrahana ireo rohin-dahatsoratra ireo, isam-bolana.
Famoronana lahatsoratra momban'ny daty
Noho ny tsifisiana fikambanana, eto amin'i Wikipedia malagasy, foronina ireo lahatsoratra mahakasika ny daty ary fenoina amin'ireo lisitry ny olona teraka na maty tamin'ny taona iray ilay lahatsoratra. Apetraka ao amin'ny pejin-dresaky ny lahatsoratra ny zavatra tokony hatao ary izay zavatra mbola mila hatao. Mbola tohizina eo akaiky eo koa ny famenoana ny lahatsoratra momban'ny kaominina frantsay.
虎grr... | 21 Jiona 2011 à 19:16 (UTC)
Novambra 2011 - Jolay 2012Hanova
Famoronana lahatsoratra ary fandikana ireo teny vahiny amin'ny teny malagasy amin'ny alalan'ny aligôritman'ny teny tetezana. Lahatsoratra eo amin'ny 150 000 no efa voaforona manaraka izany aligôritma izany, ary efa manomboka mihavitsy izao ny lahatsoratra azo foronina manaraka izany fomba izany. Tsy ata anefa ny mitety ny wikibolana hafa noho ny hasamihafa ny fanolorany, ka mba tsy hampiditra teny voadiso, ny wikibolana amin'ny teny frantsay ihany no tena notrandrahana.
Tao ihany koa ny famoronan ny endrika mety azon'ny teny iray. Eo amin'ny efatra hetsy teo ho eo no endri-teny voaforona tamin'ny teny malagasy. Eo amin'ny valo hetsy teo ho eo no isan'ireo teny iditra voaforona ho an'ireo teny hafa toa ny fiteny volapoky, espaniola ary latina. Endrika matoanteny avokoa no ankamaroan'izy ireo.
Nanomboka nodikaina tamin'ny teny vahiny ihany koa ireo teny malagasy, anefa ohatry ny tsy tian'ireo olona mpandray anjara ao amin'ni Wikiboolana ireo ny fomba fanaovana azy. Ka adaboka aloha ilay fika mandrakizao.
Asa eo amin'i Wikipedia
Notohizana ny asa famoronana lahatsoratra mikasika ny tanàna frantsay ary brazilianina eto amin'i Wikipedia. Mba tsy hampitongilana ny tahan'ireo lahatsoratra misy to amin'ny wikipedia malagasy, dia nanomboka noforonina ireo lahatsoratra mikasika ny zavatra eny amin'ny habakabaka izay ao amin'ny fehiben'asterôida. Teo amin'ny enina arivo teo ho eo ny isan'ny lahatsoratra noforonina. Ny isan'ny lahatsoratra mikasika ny tanàna frantsay eto amin'i Wikipeida dia miisa eo amin'ny roa arivo sy iray alina eo ho eo ; izany hoe eo amin'ny telopolo isan-jaton'ny isa manontolon'ny lahatsoratra eto amin'i Wiki.
Rehefa vita daholo izany dia miisa eo amin'ny fito arivo sy telo alina eo ho eo ny lahatsoratra eto amin'i Wikipeida. Manaraka izany, faha-67 no toerantsika amin'ny Wikipedia rehetra.
Jagwargrr... | 28 Jiona 2012 à 20:11 (UTC)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/ambangovangon%27ny_zavatra_ataony&oldid=442581"
Dernière modification le 28 Jiona 2012, à 20:17
Voaova farany tamin'ny 28 Jiona 2012 amin'ny 20:17 ity pejy ity.